ဓမ္မဟေ၀န် - အကိုတော်ဓမ္မဆိုက်များမှ
ကိုယ်ကိုးကွယ်နေတဲ့ မြတ်စွာဘုရား ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရမှန်းလည်းမသိ။
မူအပ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာငါးမျိုး နှင့် သစာလေးပါး တရားတော် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ
်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ်ကို သိလိုပါက ထိုစာအုပ်တွင်ထပ်ပြီး
လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြပါစေ။)
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဟူသော အယူအဆ
မေး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို.သည် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကို ယုံကြည် ကြပါသလား။
ဖြေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို.တွင် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား မရှိပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား မရှိရသည့် အကြောင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ခေတ်မီ လူမှုရေးဗေဒ ပညာရှင်၊ စိတ္တဗေဒပညာရှင် တစ်ဦးကဲ့သို.ပင် ဗုဒ္ဓတွင် ယုံကြည်ချက်ရှိပါသည်။ ဘာသာရေး အယူအဆများ၊ အထူးသဖြင့် ဂေါ့ဒ်ဟူသော ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား အယူအဆသည် လူတို.၏ကြောက်စိတ်တွင် အခြေခံ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော သဘောမျှသာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည် လက်ခံပါသည်။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ပြောခဲ့ပါသည်။
ကြောက်စိတ်ဖိစီး၊ ချည်နှောင်ခံရမှုဖြင့် လူတို.သည် အားကိုးအားထား ပြုလောက်သည့် တောင်များ၊တောများ၊ သစ်ပင်များ၊ ကျောက်ဆောင်များသို. သွားကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးကလူများသည် ဘေးအန္တရာယ်ထူပြောပြီး ရိုင်းစိုင်းသည့် ကမ္ဘာလောကကြီးတွင် နေကြရပါသည်။ တိရိစ္ဆာန် အရိုင်းများ၏ ဘေးအန္တရယ်ကိုလည်း ကြောက်ကြရသည်။ အစားအစာ လုံလုံလောက်လောက် မရမည့် အနေအထားကိုလည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန်.ရသည်။ ထိခိုက်မှု၊ နာမကျန်းဖြစ်မှုများကိုလည်း ကြောက်လန်.ကြရသည်။ ထို.အပြင် သဘာဝအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သော မိုးချုန်းခြင်း၊ လျှပ်လက်ခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း စသည်တို.သည်လည်း ရှေးခေတ်လူသားတို. အမြဲကြုံတွေ.နေရသော သဘာဝအန္တရာယ်၊ အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပါသည်။ အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်ကြားတွင် ဘ၀လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့လာသည့်အတွက် လူသားသည် ကောင်းသောအချိန်တွင် သက်သာရာရဖို.၊ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရသော ကာလတွင် ရဲစွမ်းသတ္တိပေးဖို.၊ အမှားမှားအယွင်းယွင်း ဖြစ်သော အခါမျိုးတွင် စိတ်ကိုဖျောင်းဖျပြီး သက်သာမှုပေးဖို.တို.အတွက် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား ဟူသော ကယ်တင်ရှင်၊ ဖေးမရှင်၊ တန်ခိုးရှင်အယူအဆကို တီထွင်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင်လည်း လူတို.သည် ဘေးဒုက္ခများနှင့် နဖူးတွေ.ဒူးတွေ. ကြုံကြိုက်လာသည့် အခါများတွင် ဘာသာတရားကို ပို၍ဖက်တွယ်တက်သည်ကို သတိပြုမိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားများကို သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် လိုအပ်သော စိတ်ဓာတ်အင်အားကို ပေးစွမ်းသည်ဟူ၍ ပြောဆိုကြသည်ကို ကြားဖူးကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ တချို.ကလည်း သူတို.လိုအပ်သည့်အခါ ဆုတောင်းပြီး ဆုတောင်းသည့်အတိုင်း ဖြည့်ဆည်းကူညီ မစပေးသည့်အတွက် ဘုရားတစ်ဆူဆူကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကိုးကွယ်ပါသည်ဟု ပြောဆိုကြသည်ကိုလည်း ကြားဖူးတွေ.ဖူးကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်များက ‘အားကိုးရာ တန်ခိုးရှင်ဘုရားရှင်ဟူသော အယူအဆသည် လူတို.၏ သောကနှင့်အကြောက်တရားများကို တုံ.ပြန်မှုရလဒ်အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်’ ဟူသော ဗုဒ္ဓ၏ ညွှန်ပြချက်ကို ထောက်ခံသက်သေပြနေဟန် ရှိပါသည်။ လူသားတို.အနေဖြင့် မိမိတို.၏ ကြောက်စိတ်များကို နားလည်အောင် ကြိုးစားဖို.၊ လောဘ ကပ်ငြိစိတ်များကိုလျှော့ချဖို.၊ မပြုပြင် မပြောင်းလဲနိုင်သော ဘ၀တွင် ကြုံရမည့်ကိစ္စများ၊ အရေးအရာများကိုမှု ရဲရင့်တည်ငြိမ်စွာ လက်ခံဖို. ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြရန် ဗုဒ္ဓက ညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့ပါသည်။ အကြောက်တရားကို ကျိုးကြောင်းမဲ့သော ယုံကြည်မှုဖြင့် ဗုဒ္ဓက အစားမထိုးခဲ့ပါ။ လူတို.၏ အကြောက်တရားကို ကျိုးကြောင်းညီညွတ်သော နားလည်မှုဖြင့်သာလျှင် အစားထိုးခဲ့ပါသည်။
ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားဟူသော အယူအဆနှင့်ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓက မယုံကြည်ရသည့် ဒုတိယအကြောင်းတစ်ချက်လည်း ရှိပါသေးသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဟူသော အယူအဆနှင့်ပတ်သက်၍ အထောက်အကူပြု သက်သေအဖြစ် ရပ်တည်မည့် အထောက်အထား ရှိဟန်မပေါ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘာသာများစွာရှိပါသည်။ ထိုဘာသာဝင်များ အားလုံးကပင် ဘုရား၏ နှုတ်ကပါဌ်တော် အဆုံးအမများရှိပြီး ထိုအဆုံးအမများကို သူတို.၏ မြင့်မြတ်သော ဓမ္မစာအုပ်များတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်ဟု ပြောကြသည်။ သူတို.အသီးသီးသည် သူတို. ယုံကြည်သော ဘုရား၏သဘောကို ကောင်းစွာ နားလည်ကြပြီး သူတို.၏ဘုရားသာလျှင် အစစ်အမှန်ရှိသည်၊ အခြားအခြားသော ဘာသာဝင်များ၏ ဘုရားများသည် မရှိဟု ယုံကြည်ပြောဆိုကြပါသည်။ တချို.ကလည်း ဘုရားသည် အမျိုးသား ဘာဝဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တချို.ကလည်း ဘုရားသည် အမျိုးသမီးဘာဝ ဖြစ်သည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ တချို.ကလည်း ဘုရားသည် အမျိုးသားဘာဝ၊ အမျိုးသမီးဘာဝ မဟုတ်ဘဲ ကြားဘာဝ ဖြစ်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း ပြောဆိုတက်ကြပါသည်။ သူတို.သည် သူတို. ယုံကြည်သော ဘုရားရှိကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေပြစရာ အထောက်အထား များစွာရှိသည့်အတွက် လွန်စွာအားရကျေနပ် ဖြစ်ကြပါသည်။ သို.သော် အခြားသော ဘာသာဝင်များက ၎င်းတို.၏ ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားရှိကြောင်း သက်သေပြကြသောအခါ မယုံကြည်နိုင်သောသဘောဖြင့် ပြုံးကြ၊ ရယ်ကြပါသည်။ များစွာသော ဘာသာတို.သည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာညောင်းသည်အထိ ဘုရားရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေပြရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း တကယ် စစ်မှန်သော၊ လက်တွေ.ကျသော၊ တိကျသော၊ မိမိရရပြနိုင်သော သက်သေအထောက်အထား မတွေ.သည်မှာ အလွန်ထူးဆန်း အံ့ဩစရာဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း။
ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဟူသော အယူအဆနှင့်ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓက မယုံကြည်ရသည့် တတိယအကြောင်းတစ်ချက်မှာ ထိုယုံကြည်ချက်သည် မလိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တချို.ကလည်း စကြာဝဠာအစ ဖြစ်တည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် ဘုရားရှိပါသည်ဟု ယုံကြည်ရန်လိုပါသည်ဟု ပြောကြသည်လည်း ရှိပါသည်။ သို.သော် စကြာဝဠာအစ ရှင်းပြဖို.အတွက် ဘုရားရှိသည်ဟု ယုံစရာမလိုအပ်ပါ။ ယနေ. သိပ္ပံပညာက စကြာဝဠာဖြစ်ပေါ် တည်တံ့လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားဟူသော အယူအဆလုံးဝမပါဘဲ ရှင်းလင်းပေးမှုများ ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ တချို.ကလည်း အဓိပ္ပယ်ပြည့်ဝ၍ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ဘ၀ကို ဦးတည်ရယူနိုင်ဖို.အတွက် ဘုရားရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရန်လိုသည်ဟု ဆိုကြသူများလည်း ရှိပါသည်။ ဤအချက်မှာလည်း မလိုအပ်ပါ။ သန်းပေါင်းများစွာသော လွတ်လပ်စွာတွေးတောသူများ၊ ဘာသာတရား လက်ကိုင်မထားသူများလည်း ဘုရားရှိသည်ဟု မယုံကြည်ကြပါဘဲလျက် တန်ဖိုးရှိသော၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော၊ အဓိပ္ပယ်ပြည့်ဝသော ဘ၀ကို ရယူထားနိုင်သူ များစွာရှိပါသည်။ တချို. ယူဆပုံမှာလည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ လူသားသည် သဘာဝအားဖြင့် အားနည်းသည့်အတွက် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ရန် အင်အားပြည့်ပြည့်၀၀ မရှိသည့်အားလျော်စွာ လိုအပ်သော အင်အားရဖို. တန်ခိုးရှင် ဘုရားအပေါ် ယုံကြည်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်ဟု ဆိုကြပြန်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်လည်း လက်တွေ. အထောက်အထားများအရ ဤသဘောမှာ မမှန်ကန်ကြောင်း တွေ.ရပြန်ပါသည်။ များစွာသော လူများတွင် မကြုံစဖူး ထူးခြားသော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်လာသည်ကို တွေ.ရပါသည်။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ အားကိုးပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာစွာ ကြိုးစားကြသဖြင့် မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများ၊ အားနည်းချက်များသည် ထူးထူးခြားခြား ပပျောက်ပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အရည်အသွေးများ ဖြစ်လာပါသည်။ ထိုလူများသည် ဘုရားအပေါ် ယုံကြည်ကြသူများ မဟုတ်ကြပါ။ ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို.၊ လွတ်မြောက်ဖို.အတွက် လူသားသည် ဘုရားအပေါ် ယုံကြည်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆကြသူများလည်း ရှိပါသည်။ ဤအချက်မှာလည်း ဘာသာရေးအခြေခံ သဘောတရားဖြစ်သည့် ကယ်တင်ခြင်းဟူသော သဘောကို လက်ခံယုံကြည်မှသာလျှင် ကောင်းမွန်ဟုတ်မှန်သည့် အနေအထားမျိုး ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို.သည် ထိုအယူအဆကိုလည်း လက်မခံကြပေ။ လူသားတိုင်းသည် မိမိ၏ အတွေ.အကြုံများပေါ်တွင် မူတည်လျက် မိမိ၏ စိတ်ကို ဖြူစင်သန်.ရှင်း မွန်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော အစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ မေတ္တာတရား၊ အကြင်နာတရားနှင့် အချင်းချင်းနားလည်မှု တရားများကိုလည်း လူတိုင်းပွားများနိုင်သည်ဟု လက်ခံပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို.သည် သူတို.၏ အာရုံကို ကောင်းကင်ဘုံဆီမှသည် သူ၏ နှလုံးသားသို.သာ ပို.ဆောင်ထားပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ.နေရသော ပြဿနာ အခက်အခဲများကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို. တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ဩစတြေးလျလူမျိုး ထေရ၀ါဒ၊ ဗုဒ္ဓရဟန်းတော် V.S Dhammika ၏ ဖြေကြားချက်များကို ဆရာကြီးဒေါက်တာသိန်းလွင် ဘာသာပြန်ထားပါသည်။)
လူသားတို. သေဆုံးပြီးနောက် ဘယ်ကိုသွားကြမည်နည်း ဟု မေးလာလျှင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြမည်ထင်သည်။ ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်သူများက ထာဝရငရဲသို. (သို.) ထာဝရ ကောင်းကင်ဘုံသို. ရောက်ရှိမည် ဟုဖြေကြမည်။ နောက်ဖြစ်နိုင်သည့် အဖြေတစ်မျိုးက သေဆုံးပြီးသည်နောက် လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟု ဖြေမည်။ နောက်ထပ် အမျိုးမျိုးသောအဖြေများစွာ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သေးသည်။ အထက်ပါ မေးခွန်းပုံစံမျိုးကို မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ၀စ္ဆပရိဗိုဇ်က လျှောက်ထားမေးမြန်း ခဲ့ပါသေးသည်။ အောက်ပါ အမေး၊ အဖြေများသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့် ၀စ္ဆပရိဗိုဇ်တို. အပြန်အလှန် ပြောဆိုကြပုံများ ဖြစ်ပါသည်။
“အရှင် ဂေါတမ၊ ကျွန်ုပ် နားမလည်နိုင် ဖြစ်ရပါပြီ၊ အနည်းငယ် နားလည်တာလေးတောင် ပျောက်သွားရပါပြီ”
“ခက်ခဲနက်နဲလို. သင်နားမလည်နိုင်တာပါ၊ ကောင်းပြီဝစ္ဆ သင့်ရှေ.မှာ မီးတောက်တစ်ခုရှိနေမယ် ဆိုရင် သင်သိမလား”
“မီးတောက်က ဘယ်အရာကိုစွဲပြီး လောင်နေတာဆိုတာကိုကော သင်သိမလား”
“‘ဒါလည်း သိပါတယ် အရှင်ဂေါတမ”
“မီးငြိမ်းသွားရင်ကော သိမလား ၀စ္ဆ”
“ဒါကိုလည်း သိပါတယ် အရှင်ဂေါတမ”
“ငြိမ်းသွားတဲ့မီးက အရှေ.၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်၊ ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာရော သိသလား ၀စ္ဆ”
“‘ဒါတော့ မသိနိုင်ပါဘူး အရှင်ဂေါတမ၊ မီးဆိုတာ မြက်၊ထင်း ဆိုတဲ့ လောင်စာကိုစွဲပြီး လောင်တာပါ၊ လောင်စာကုန်လို.သာ မီးငြိမ်းသွားရတာပါ”
“၀စ္ဆ၊ ခန္ဓာငါးပါးကို သတ္တ၀ါလို. ပညတ်ရင်ရမယ်၊ ငါဘုရားကတော့ ခန္ဓာငါးပါးကို ပယ်ပြီးပြီ၊ ထန်းငုတ်တိုလို ဘယ်တော့မှ မဖြစ်တော့ဘူး၊ လွတ်မြောက်သွားပြီ”
“အရှင်ဂေါတမ၊ အရှင့်ရဲ. စကားတွေဟာ အနှစ်တွေပဲရှိတဲ့ အင်ကြင်းပင်ကြီးလိုပါပဲ၊ တပည့်တော်ကို ဒီနေ.ကစပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ ဥပါသကာလို. အသိအမှတ်ပြုတော်မှုပါ ဘုရား”
လျှပ်စစ်ဓာတ်သည် တစ်သမတ်တည်း တည်ရှိနေသလားဟု မေးလျှင် မတည်ပါဟု ဖြေရပေမည်၊ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပြောင်းလဲနေပါသလားဟု မေးလျှင် မပြောင်းပါဟုပင် ဖြေရပေမည်၊ အကယ်၍ လှုပ်ရှားမှုရှိသလားဟု မေးလျှင်လည်း မလှုပ်ရှားပါဟု ဖြေရပေမည်။ လူသေပြီးနောက် လူ.အတ္တ၏အခြေအနေများကို မေးသည့်အခါ ဗုဒ္ဓကအလားတူ အဖြေမျိုးပေးခဲ့သည်။ သို.ရာတွင် ယင်းဖြေဆိုပုံများသည် ၁၇-၁၈ ရာစု သိပ္ပံပညာ အစဉ်အလာများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိကြသေးပေ။ (ဂျေ-ရောဘတ်အိုပင်းဟေးမား)
ဘလော့ဂါ အစ်ကိုတစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်လူမျိုး စာပေပညာရှင် ဆာအက်ဒွင်အာနိုးလ်ဒ် ရေးသားသည့် “အာရှတိုက်၏ အလင်းရောင်” စာအုပ်ထဲက စာလေးတွေ ဖော်ပြပေးဖို. ညွှန်ပြလာတဲ့အတွက် ဒီစာစုလေးကို ရှာဖွေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အဲဒီစာအုပ်ကို ဟိုအပိုဒ်နည်းနည်း ဒီအပိုဒ်နည်းနည်း ဖတ်ထားတာပါ။ ကဗျာဆရာ၊ စာပေပညာရှင် ဆာအက်ဒွင်အာနိုးလ်ဒ်ဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓကို အာရှတိုက်၏ အလင်းရောင်ဟူသော ကဗျာဖြင့်ရေးဖွဲ. သီကုံးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေခဲ့သောစာအုပ် ဖြစ်ပြီး အကြိမ်ပေါင်း ရာကျော် ရိုက်နှိပ်ဖြန်.ချီနေရပါသည်။ အခုစာစုလေးကိုတော့ ဆရာကိုရင်ဩရဲ. စာအုပ်ထဲကတွေ.လို. ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါစာရေးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီစာစုလေးကို “THE LIGHT OF ASIA” နဲ. ဆရာမောင်သာနိုးရဲ. အာရှတိုက်အလင်းရောင် စာအုပ်များမှ ကောက်နုတ်ထားတယ်လို. ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ (၀န်ခံချက်)
လူသားမျိုးနွယ်ဆက် တစ်ဆက်အထက်က ဥရောပတိုက်မှာ အာရှတိုက်မှ ဤဘာသာတရားအကြောင်းကို လုံးဝနီးပါး မသိကျွမ်းခဲ့ကြပါချေ။ သို.သော် ဤဘာသာတရား (ဗုဒ္ဓဘာသာ)သည် ရာစုနှစ် နှစ်ဆယ့်လေးစုနှစ်အတွင်း တည်တံ့ ရှင်သန်နေခဲ့ပါပြီ။
ယနေ.အချိန်မှာ ဘာသာဝင်ဦးရေအရ၊ ပျံ.နှံ.ရာဒေသအရ၊ အကျယ်အ၀န်းအရ မည်သည့် အယူဝါဒထက်မဆို သာလွန်နေပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို.၏ လူသားမျိုးနွယ် သန်းပေါင်း လေးရာ့ခုနှစ်ဆယ်သည် ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ နေနည်း၊ သေနည်းအတိုင်း နေနေကြ၊ သေနေကြပါသည်။ဤရှေးခေတ်ဆရာတို.၏ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ လွှမ်းမိုးမှုသည် လောလောဆယ်အချိန်မှာ နိပေါနှင့် သီဟိုဠ် (သီရိလင်္ကာ)ကနေ အရှေ.ပိုင်းကျွန်းဆွယ်တစ်ဝန်း၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တိဘက်၊ အလယ်အာရှ၊ ဆိုက်ဘီးရီးယား၊ ဆွီဒစ်၊ လက်ပလန်တို.အထိ ပျံ.နှံ.နေပါလေ၏။
အိန္ဒိယကိုယ်တိုင်ကိုလည်း ဤမြင့်မြတ်သည့် ယုံကြည်မှု အင်ပါယာထဲမှာ ထည့်သွင်း၍ ရကောင်းပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုသည် ဗုဒ္ဓဇာတိအရပ်မှ လွန်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ မြင့်မြတ်လှသည့် ဓမ္မသည် ယခုခေတ် ဗြာဟ္မဏ၀ါဒအပေါ်မှာ ဖျောက်ဖျက်မရအောင် ခတ်နှိပ်လျက်သား ဖြစ်နေပါသည်။ ဟိန္ဒူတို.၏ အဓိကဓလေ့ထုံးစံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများသည် ဗုဒ္ဓဓမ္မ၏ သိမ်မွေ.လှသော ဩဇာညောင်းမှု မကင်းကြောင်း ထင်ရှားလှပါသည်။
ထို.ကြောင့် လူသားထု သုံးပုံတစ်ပုံတို.သည် မိမိတို.၏ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဘာသာတရားဆိုင်ရာ အယူအဆများကို ဤတော်ဝင် မဟာမင်းသားမြတ်ဆီမှ ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤမင်းသားမြတ်၏ ပုဂ္ဂလိကဘ၀သည် လက်ရှိအကိုးအကားများအရ မပြည့်မစုံသာ သိရသေးသော်လည်း သဘောတရားပိုင်းမှာကား အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်ပါပေသည်။ခြွင်းချက်တစ်ခုကား ရှိပါ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ စာအုပ်များမှာ အချက်အလက်များ မညီညွတ်ခြင်း၊ ပမာဒလေခဖြစ်ခြင်း၊ ဖြည့်စွတ်ခြင်း၊ အဓိပ္ပယ်ကောက်မှားခြင်းတို. ပါတက်ပါသည်။ သို.သော် တစ်နေရာမှာကား တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်နေပါလေသည်။
ယင်းမှာ မင်းသားတစ်ပါး၏ အကောင်းဆုံး အရည်အချင်းများကို ပညာရှင်တစ်ဦး၏ အသိဥာဏ်၊ အာဇာနည်တစ်ဦး၏ အားသွန်မြုပ်နှံမှုတို.နှင့် ပေါင်းစည်း ညီညွတ်ထားသူ ဤအိန္ဒိယတိုင်းရင်းသား မဟာဆရာမြတ်၏ စင်ကြယ်သန်.ရှင်းမှုနှင့် ကြင်နာမြင့်မြတ်မှုတို.ကို ပျက်ပြားစေသည့်အရာ အပြုအမှု တစ်စွန်းတစ်စ စကားတစ်ခွန်း တစ်ပါဒမျှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း လုံးဝမရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါလေသည်။
အားလုံးအတွက် မျှော်လင့်ချက် ထာဝရတည်ရှိမှု၊
ထာဝရရှင်သန်သော အတိုင်းအဆမဲ့ မေတ္တာတရား၊
အဆုံးစွန်သော ကောင်းကျိုးကို မပျက်ပြားစေနိုင်သည့်
လူသားတို.ဘ၀ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ်ဖူးသမျှတို.ထဲတွင်
ဂုဏ်ယူဖွယ် အကောင်းဆုံးသော ဖော်ထုတ်ချက်များ ပါရှိနေပါသည်။
နိဗ္ဗာန်7Comments »
ကျွန်တော် ဘလော့ရေးတာလည်း ၇-လကျော်တော့ ရှိလာပြီ။ တက်သလောက် မှတ်သလောက် ရေးလိုက်၊ သူများ ရေးပြီးသားလေးတွေ ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက် လုပ်နေပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ. အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင် အကြောင်းကိုတော့ တစ်ခါမှ မဖော်ပြရသေးဘူး။ ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို အပိုင်းလေးတွေခွဲပြီး ရေးသားပါရစေ။ မှားနေတာရှိရင်လည်း အားမနာတမ်း ဝေဖန်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဗြဟ္မဇာလ သုတ္တန်မှာ ‘ အဘူတံ အဘူတတော နိဗ္ဗေဌေတဗ္ဗံ’ ရတနာသုံးပါးနဲ. ပတ်သက်လာရင် မမှန်တာကိုမမှန်ဘူးလို. ဖြေရှင်းပြရမယ်လို. မိန်.ကြားထားတော်မူလို.ပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို.ရဲ. မလုံလောက်တဲ့ ဝေါဟာရတွေနဲ. ဘယ်လိုပဲဖော်ပြပေမဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ဖော်ပြဖို. မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ နိဝါနဆိုတဲ့ ပါဠိကပြောင်းလာတဲ့ စကားပါ။ နိ ဆိုတာက ကင်းခြင်း၊ မရှိခြင်း ဖြစ်ပြီးတော့၊ ၀ါန ဆိုတာကတော့ လိုချင်တပ်မက်မှု တဏှာဖြစ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ကောင်းကင်ဘုံတစ်ခု မဟုတ်ပါ၊ တစ်နေရာရာမှာ တည်ရှိနေတာလည်း မဟုတ်ပါ။ ဒါဆို နိဗ္ဗာန်သည် မည်သို.နည်း။ အောက်ပါ သာဓကကို ကြည့်လော့။
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အာရုံခြောက်ပါးမှာ ရာဂမီး၊ ဒေါသမီး၊ မောဟမီး၊ ဇာတိမီး၊ ဇရာမီး၊ မရဏမီး၊ သောကမီး၊ ပရိဒေ၀မီး၊ ဒုက္ခမီး၊ ဒေါမနဿမီး၊ ဥပါယာသမီးဆိုတဲ့ မီး(၁၁)ပါးငြိမ်းပြီးတော့ အမြတ်ဆုံးချမ်းသာကို ရရှိသွားတာပါ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ စိတ်၊ စေတသိတ်၊ ရုပ်တို. မဟုတ်တဲ့ ပရမတ္ထတရားပါ။ သဿတလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဥစ္ဆေဒလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်ဆိုတဲ့ ကာလသုံးပါးမှလွတ်တဲ့ ကာလ၀ိမုတ္တိတရား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို. အသိဥာဏ်လေးနဲ. မတွေးနိုင်တာကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကို ဘာမှမရှိသော အရာတစ်ခုဟု မမှတ်ယူသင့်ပါ။
အကြင်နိဗ္ဗာန်အရပ်၌ ရုပ်တရား အပေါင်းတို.လည်းမရှိ၊ ဈာန်တရားအပေါင်းတို.လည်း မရှိ၊ ပစ္စုပ္ပန်လောက၊ တမလွန်လောကလည်းမရှိ၊ နှစ်ပါးစုံသော လ၊နေတို.သည်လည်း မရှိကုန်၏။ ထိုနိဗ္ဗာန်သည် ရှိသည်သာတည်း၊ ထိုနိဗ္ဗာန်၌လည်း တစ်စုံတစ်ခုသောဘ၀မှ လာခြင်းကို ငါမဟော၊ တစ်စုံတစ်ခုသောဘ၀သို. သွားခြင်းကိုလည်း ငါမဟော၊ တစ်စုံတစ်ခုသော အရပ်၌တည်ခြင်းကိုလည်း ငါမဟော၊ ရွေ.လျားစုတေခြင်းကိုလည်း ငါမဟော၊ ပဋိသန္ဓေအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်းကိုလည်း ငါမဟော၊ ထိုနိဗ္ဗာန်သည် တည်ရာမရှိ၊ ဖြစ်ခြင်းမရှိ၊ အာရုံပြုမှု မရှိသည်သာတည်း၊ ဤသဘောသည်သာ ဆင်းရဲ၏အဆုံးတည်း။ (ဥဒါန်းပါဠိတော်)
ဘုရားရှင်တို. ပွင့်သည်ဖြစ်စေ မပွင့်သည်ဖြစ်စေ နိဗ္ဗာန်ကတော့ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အ၀ိဇ္ဇာဆိုတဲ့ မျက်မှန်နက်ကြီးက ကျွန်တော်တို.ကို ဖုံးကွယ်ထားလို.ပါ။ သင်္ခါရနဲ. နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အချင်းချင်းဆန်.ကျင်ဘက်တွေပါ၊ သင်္ခါရမှာ နိဗ္ဗာန်မရှိသလို နိဗ္ဗာန်မှာလည်း သင်္ခါရတို.မရှိပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာ ခံစားမှုမရှိပါဘူး၊ ခံစားမှု မရှိခြင်းကပဲ ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားမှုမရှိခြင်းသည် မည်သို.ချမ်းသာမည်နည်း။ သာဓကပြပါအံ့။ မြတ်စွာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က အရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်မြတ်က “ငါ့ရှင်တို. နိဗ္ဗာန်သည် ချမ်းသာလေစွတကား၊ နိဗ္ဗာန်သည် ချမ်းသာလေစွတကား” လို. ကျူးရင့်တော်မူတော့ အရှင်ဥဒါယီက အခုလိုလျှောက်ပါတယ်၊ “အရှင်ဘုရား နိဗ္ဗာန်မှာ ဝေဒနာသဘောဖြင့် ခံစားရန်လုံးဝမရှိပါ၊ ခံစားရန်လုံးဝမရှိသော နိဗ္ဗာန်မှာ ချမ်းသာခြင်းဆိုတာ ရှိနိုင်ပါမည်လော” ဒီတော့ အရှင်သာရိပုတ္တရာ အရှင်မြတ်ကြီးက အခုလို ဖြေကြားတော်မူပါတယ်- “ငါ့ရှင် ဝေဒနာသဘောဖြင့် ခံစားရန်လုံးဝမရှိခြင်းသည်ပင် ချမ်းသာခြင်း ဖြစ်ပေသည်”
နိဗ္ဗာန်ကို မည်သို.မျက်မှောက် ပြုနိုင်မည်နည်း၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်က “ချစ်သားတို. သတိပဋ္ဌာန်တည်းဟူသော ခရီးသည် သတ္တ၀ါတို.၏ ကိလေသာမှ စင်ကြယ်ခြင်းငှာ သောကပရိဒေ၀တို.ကို လွန်မြောက်ခြင်းငှာ ဒုက္ခဒေါမနဿချုပ်ခြင်းငှာ၊ အရိယာမဂ်ကို ရခြင်းငှာ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာ တကြောင်းတည်းသော လမ်းဖြစ်တယ်” လို. မိန်.ကြားတော်မှုပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်သို. မျက်မှောက်ပြုပြီးသူသည် မည်သို.ဖြစ်သွားသနည်း။ ယမကသုတ်တွင် ဤမေးခွန်း၏ အဖြေသည်ပါပြီး ဖြစ်၏။ အရှင်သာရိပုတ္တရာ အရှင်မြတ်ကြီးက “ငါ့ရှင်ယမက အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက အာသ၀ကုန်ပြီးသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် သေလွန်ပြီးသည်နောက် မည်သို.ဖြစ်သွားသနည်း ဟု မေးလာသော် သင်မည်သို. ဖြေကြားမည်နည်း” ဟု မေးမြန်းတော်မှုရာ အရှင်ယမက က “အရှင်ဘုရား တပည့်တော်၏ အဖြေသည် ဤသို.ဖြစ်ပါသည်ဘုရား၊ ခန္ဓာငါးပါးတရားစုသည် အမြဲမရှိ၊ အမြဲမရှိသဖြင့် ဆင်းရဲသောတရားစု ချုပ်ပျောက် ပျက်စီးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်ဘုရား” ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားတော်မူပါသည်။
သက်ရှိသက်မဲ့ အရာအားလုံးဟာ မတည်မြဲသော အနိစ္စတရားများသာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးမရသော အနတ္တ တရားများသာဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ခါရတရား အားလုံးဟာ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲမှုတွေဟာလည်း လိုချင်တပ်မက်မှု လောဘကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်။ ထင်းမီးဟာ လောင်စာအသစ်မထည့်ရင် ချုပ်ငြိမ်းသွားရသလို လိုချင်တပ်မက်မှုတွေ ကင်းသွားတဲ့အခါ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်း ချုပ်ငြိမ်းသွားရပါတယ်။ ဆင်းရဲခြင်း ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းဟာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ နိရောဓသစ္စာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က အမှောင်ကင်းသော အလင်းရောင်ကို ပြသပေးတော်မူခဲ့ ပြီးပါပြီ။ ထိုလမ်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းရန်မှာ ကျွန်တော်တို.၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသာ ယုံကြည်ပြီးတော့ မိမိတို.ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု မရှိရင်တော့ စစ်မှန်သောသုခချမ်းသာ၊ အနိစ္စတရားထဲမှ နိစ္စတရားကို ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
“သင်တို.သည် မိမိတည်းဟူသော ကိုင်းကျွန်းရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော့၊ မိမိဟူသော မှီခိုရာ ရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြလော့၊ အခြားသော မှီခိုရာဖြင့် မနေကြကုန်လင့်” (မဟာပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ်)
ဗုဒ္ဓတရားတော်သည် တန်ခိုးရှင်၊ ဖန်ဆင်းရှင်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်သောတရားမဟုတ်၊ ဆုတောင်းရုံမျှဖြင့် ပြည့်စုံမည်မဟုတ်၊ တရားသေ၀ါဒကို အားပေးသော ဘာသာမဟုတ်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင် ဥာဏ်ပေါ်တွင် အခြေတည်သော ဘာသာဖြစ်သည်၊ ဆင်ခြင်တုံတရားကို အခြေခံသည့် သဘောတရားများပါဝင်သော ဘာသာတရားဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် သဘောတရားမျှသာမဟုတ် လက်တွေ.ပါကျင့်ကြံရသော ဘာသာဖြစ်သည်။ (အရှင်အာနန္ဒမေတ္တေယျ)
ခန္ဓာငါးပါးမှ လွတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်သော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် နက်ရှိုင်း၏ မဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို. နှိုင်းယှဉ် တိုင်းတာရမရ၊ ပြန်လည်မွေးဖွားသည်ဟုဆိုမှု ဤကိစ္စအတွက် မသင့်မြတ်ပေ၊ မွေးဖွားသည်လည်းမဟုတ်၊ မမွေးဖွားသည်လည်း မဟုတ်ဟု ဖြေဆိုလျှင်လည်း မလျော်ကန်ချေ။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် ထူးခြားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတ္တမရှိကြောင်း ဖော်ညွှန်းပြသော ၀ါဒဖြစ်သောကြောင့်တည်း၊ လောက၌ ရှိရှိသမျှ အရာများသည် အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊ အနတ္တမျှသာဖြစ်သည်၊ အဆိုပါ မတည်မြဲသော ဆင်းရဲသော အနှစ်သာရမရှိသော အရာတို.ကို စွန်.လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် အစုံးစွန်သော ထွက်မြောက်လမ်းဖြစ်သည့် နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်ပေမည်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်ကား မပြောင်းလဲသော အမြဲရှိသော အမှန်တရားပေတည်း။ (ဦးလောကနာထ-အီတာလျံဘုန်းတော်ကြီး)
စကြာဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးသည် အလွန်ကျယ်လှသည့် စစ်မြေပြင်ကြီး တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ နေရာတိုင်း တိုက်ခိုက်နေကြသည်။ ဘ၀ဟူသည် ဘာမျှမဟုတ်ပေ။ ကြောက်စရာကောင်းသော ရောဂါများနှင့် ရောဂါပိုးမွှား တို့၏ အချီးနှီးသော ဆန့်ကျင်တုပြိုင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အနုမြူ အနုမြူချင်း အက်တမ် အက်တမ်ချင်း အီလက်ထရွန် အီလက်ထရွန်ချင်း ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက် နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ စိတ်ဟူသည် တိုက်ပွဲတစ်ခု၏ သဏ္ဌန်သာတည်း၊ သဏ္ဌန်များ အသံများ အရသာများသည် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့် အင်အားစုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု များသာဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲများ ဖြစ်နေခြင်းက ပြည့်စုံသော ငြိမ်းချမ်းမှု တစ်ခုရှိနေကြောင်း သက်သေပြနေသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အခေါ် နိဗ္ဗာန်ပင် ဖြစ်သည်။ (ဆရာတော်အရှင်နာရဒ)
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် အဆုံးစွန်သော သစ္စာတရားရှိသော်လည်း ထာဝရဘုရားဟူ၍မရှိ၊ ဆင်းရဲကြောင်းတရားကိုရှောင်ပြီး ရုပ်နာမ်တို.၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်သို. ရောက်ရာရောက်ကြောင်းကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ရန်သာ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မှုခဲ့ပါသည်။ (ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဟောင်း ဦးသန်.)
လူသားများကို လွတ်မြောက်စေသူမှာ ဗုဒ္ဓမဟုတ်ပေ၊ သို.သော် ဗုဒ္ဓသည် သူကိုယ်တိုင် လွတ်မြောက်ပြီးသကဲ့သို. လူသားများ၏ လွတ်မြောက်ရေးကို ဟောကြားပြသသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ သစ္စာဒေသနာကို လူသားများ လက်ခံကြသည်မှာ ဗုဒ္ဓဟောသောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဗုဒ္ဓ၏ စကားတော်များကြောင့် နိုးကြားလာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အမြင်မှန်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို.ကိုယ်ပိုင် စိတ်ဓာတ်အလင်းရောင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ (ဒေါက်တာအိုဒင်ဘာ့ဂ်-ဂျာမန်ပညာရှင်)
ကဲ…. ကျွန်တော်လည်း ဖတ်မှတ်ထားတဲ့ စာအုပ်အများအပြားကို ကိုးကားပြီး အပိုင်း(၁)ကို ရေးသားခဲ့ပါပြီ။ စာလေးကတိုပေမယ့် ကိုးကားထားတဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ ငါးအုပ်ကျော်ရှိပါမယ်။ ရေးစရာမရှိတော့လို.တော့ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း လေ့လာဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားပါမှာ စိုးရိမ်လို. ရပ်လိုက်တာပါ။ နောင်ကြုံရင် ကြုံသလို နိဗ္ဗာန်နဲ.ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမယ်။ အင်တာနက်အခက်အခဲနဲ. အချိန်အခက်အခဲကြောင့် တပတ်တစ်ကြိမ်ပဲ ရေးနိုင်ပါတယ်။ အမှားပါရင်လည်း ပြုပြင်ပေးကြဖို. မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။
မသေခင် 10 Comments »
ကျွန်တော် မောင်ရဲကြီးတစ်ယောက် မသေခင်ဘာလုပ်ကြမလဲ (၁)နဲ.(၂)ကို ရေးပြီးတဲ့နောက် အခုဆက်လက်ပြီး အပိုင်း(၃)ကို ဆက်လက် ရေးခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျ။ သေတဲ့အကြောင်းပြောလို. မင်္ဂလာမရှိဘူးလို.တော့ မထင်ကြပါနဲ.ခင်ဗျ။ ဒါက လူသားတိုင်း မလွဲမသွေကြုံရမယ့် ကိစ္စကိုးဗျ။ သေတယ်ဆိုတာက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တခေမိန္န မိန်.ကြားတော်မူသလို မှည့်နေတဲ့အသီးလိုပါပဲ။ အချိန်မရွေး ကြွေကျနိုင်တယ်ဗျ။ အသက်ငယ်လို. မသေသေးဘူး လို.မရှိဘူး၊ ချမ်းသာလို. မသေဘူး ဆိုတာ မရှိဘူး။ တစ်ဘ၀သာသနာပြုကျမ်း ဆရာတော်ဦးဃောသိတ မိန်.ကြားတော်မူသလို-
ဤကိုယ်မုချ၊ မနေရဘူး’ ဗျ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို. မသေချင်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန်.ကြားတော်မူတာက ‘ မသေချင်ရင် အသက်ရှူပါ’ တဲ့။ ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာမသေဖို. အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ နောင်ဘယ်တော့မှ မသေဖို. သေခြင်းကနေ အပြီးတိုင် လွန်မြောက်ဖို. အတွက်ပါတဲ့။ လူတိုင်းတော့ အသက်ရှူကြတာပေါ့ဗျာ။ ဆရာတော် ဆိုလိုတာက သတိပညာသွင်းပြီး အသက်ရှူရပါမယ်တဲ့။ အသက်ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်လုပ်တဲ့အခါ နှာသီးဝ ဒါမှမဟုတ် အထက်နှုတ်ခမ်းဖျား လေထိသွားတဲ့နေရာကို သတိထားပြီး လေ၀င်ရင်ဝင်တယ်၊ လေထွက်ရင်ထွက်တယ်လို. မှတ်ပြီး အသက်ရှူရမှာပါ။ အတွင်းဝင်သွားတဲ့ လေနောက်ကို မလိုက်ရပါဘူး။ လိုက်ရင် အတွင်းပျံ.လွင့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ လေထွက်တဲ့အခါမှာလည်း ထွက်လေနောက် မလိုက်ရပါဘူး။ လိုက်ရင် အပြင်ပျံ.လွင့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ လေထိတဲ့ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ စိတ်ကိုထားရပါမယ်။ ဒါကို အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တယ်လို. ဆိုရပါမယ်။ လူချင်းတူပေမဲ့ အသက်ရှူတာချင်း မတူဘူးဆိုတာ ဒါပေါ့ဗျာ။ ဒီနည်းလေးက ရပ်၊ သွား၊ ထိုင်၊ လျောင်း ပုံစံအမျိုးမျိုးမှာမဆို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
၀င်လေထွက်လေကို မေ့နေတဲ့သူဟာ ဘ၀မေ့နေတဲ့သူပါ။ တကယ်သေရေးကြုံလာပြီဆိုရင် ဒါနတရား၊ သီလတရားက ချက်ချင်း အကူအညီပေးနိုင်ဖို. မလွယ်ကူပေမဲ့ ဒီအာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့ အပြည့်အ၀ အကူအညီပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ရတဲ့အခါတိုင်း ငါးမိနစ်ဖြစ်စေ၊ နောက်ဆုံး တစ်စက္ကန်.လေးဖြစ်စေ ဒီအသက်ရှူနည်းလေးကို လေ့ကျင့်နေဖို.လိုပါမယ်။ အကျင့်ရလာတဲ့အခါ ခက်ခဲတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း ကို ပွားများရင် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ရှုပွားပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ရှုပွားရင် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး ရှုပွားပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ရှုပွားရင် အရဟတ္တမဂ်၊ အရဟတ္တဖိုလ် ရောက်နိုင်တယ်လို. မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးဖို.လိုပါတယ်။ နောက်ကြုံမှ ဒီအပိုင်းကို ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမယ်။ အခုတော့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ. လင်္ကာလေးနဲ. နိဂုံးချုပ်ပါရစေခင်ဗျာ။
‘ ခန္ဓာရတွက်၊ သေဖို.ရက်၊ ချိန်းချက်မရှိကြ၊
သေခါနီးမှာ နိမိတ်လာ၊ ရောက်ရာဘုံဘ၀၊
ငရဲစရှိ၊ ဒုဂ္ဂတိ၊ မြင်ဘိထိုကာလ၊
ဘယ်သား ဘယ်သမီး ဘယ်ပစ္စည်း ချီးနှီးထိုကာလ၊
မသာနှလုံး သေလွန်ဆုံး အရှုံးနာကြည်းစွ၊
ချိန်မနှောင်းခင် ယခုပင်၊ မြန်လျှင်အားထုတ်ကြ၊
မဂ္ဂင်မှသာ အားကိုးရာ၊ ခေမာဖြောင့်တန်းလှ၊
မဂ်ဥာဏ်ဆိုက်ရောက်၊ ကြွေးကုန်ပျောက်၊ ကဲမောက်လွန်ချမ်းမြ။’
ခင်မင်ရတဲ့ Blogger အပေါင်း ဗုဒ္ဓခေတ်မြတ် တွေ.ရကျိုးနပ်ကြပါစေ။
ကျွန်တော် "ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍" ဆောင်းပါးများကို မတင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ကြပါစေ။
ယခုအခါ မြန်မာပြည်တွင် သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပါက နတ်ပြကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အကုန်လုံး လိုလိုပင် နတ်မပြရင် သာသနာ့ဘောင်ထဲ မရောက်၊ မ၀င်ရဟု မှတ်ထင်နေကြ၍ ဤဆောင်းပါးကို အားလုံးနှင့် အတိုက်အခံလုပ်ကာ ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ တကယ်တမ်း စမ်းစစ်ကြည့်ပါလျှင် ရှင်ပြုလျှင် နတ်ပြကြရမည်ဟု ဘုရားရှင်က လမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရပါ၏။ အဋ္ဌကထာ ဋီကာများတွင်လည်း ပြဆိုထားခြင်း မရှိပါ။ နတ်ဝါဒီများမှ အစပြုလုပ်ကာမှ အစဉ်အလာဖြစ်သွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် မပြုလုပ်ခဲ့သော နတ်ပြခြင်းအလေ့ကို ပုဂံခေတ်တွင် စတင်ပြုလုပ်သည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ထိုပုဂံခေတ် နတ်ဝါဒီများကစတန့်ထွင်ခြင်းသာပင်ဖြစ်ပေသည်။
ရှင်ပြုခြင်း အစသည် သားတော်ရာဟုလာမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော် သားတော်ရာဟုလာ ရှင်ပြုစဉ်ကလည်း ဘယ်နတ်ကိုမှ မပြပါ။ အရှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီးရဲ့ညီအငယ်ဆုံး ရေ၀တ ရှင်ပြုစဉ်ကလည်း ဘယ်နတ်ကိုမှ မပြခဲ့သည်ကို တွေ့ရပြန်သည်။ ရှင်ပြုရာတွင် နတ်ပြရန်လိုအပ်သည်ဟု ဘုရားရှင်က ဟောကြားတော် မူခဲ့ပါသလား၊ ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် နတ်မပြဘဲ ရှင်အဖြစ် ရောက်ခဲ့သူချည်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း ဤသို့ နတ်ပြခြင်းကို မပြုလုပ်ပါ။
မည်သို့သော နတ်ကို ပြသနည်းဟု မေးကြည့် စမ်းစစ်ကြည့်ပါက အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေသည်။ မြန်မာပြည်အနှံ့ နတ်ပြသူတွေ အများကြီးဖြစ်သည် ။ ထိုနတ်တို့က ကိုယ်ပွား မိတ္တူတွေ ပွားထားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် နတ်ကလုံးတွေလား။ တစ်ချို့က မိဆိုင် ဖဆိုင်နတ်ကို ပြသည်၊ အချို့က နယ်တော်ရှင်၊ အချို့က ရွာတော်ရှင်၊ အချို့က မိရိုးဖလာနတ်များကို ပြသည်ဟု အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေသည်။ ဘာသာရေးစာပေ အတော်အတန် လေ့လာဖူးသူတွေကတော့ သာသနာတော်စောင့်နတ်၊ သမ္မာဒေ၀နတ်တွေကို ပြသခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။ အယူအဆ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အချို့သော လူကြီးများသည် နတ်မပြရင် ကိုရင် မ၀တ်ကောင်းဘူး၊ နတ်ကိုင်တတ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မည်သို့သော နတ်တွေက ကိုင်ကြသနည်း၊ ရွာတော်ရှင်၊ နယ်တော်ရှင်၊ မိရိုးဖလာနတ်တို့သည် သာသာနာတော်သို့သတ်သွင်းသည်ကို နှောက်ယှက်ချင်တိုင်း နှောက်ယှက်လို့ ရပါ၏လော။ ရှင်ပြုခြင်းသည် ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုသိုလ်တွင် စွမ်းရည်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဓမ္မရေးရာ လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓမ္မလုပ်ငန်းကို ယုံယုံကြည်ကြည်ပြုလုပ်လျှင် ကုသိုလ်က စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မည်။ သာသနာရေး ....သာသနာရေးဆိုပြီး လုပ်နေတာတွေက ဘုရားရှင်နှင့် တပည့်သာဝကကြီးများ ဆောင်ရွက်တော် မမူခဲ့တာတွေကို အဘယ်ကြောင့် လုပ်နေကြပါသနည်း။ ရှင်လောင်းကို နတ်ပြတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်ပါဆိုပြီး ပြောနေတဲ့သူတွေဟာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဓမ္မကို ကကြီးခခွေးလောက်တောင် မသိတဲ့ လူတွေပင် ဖြစ်သည်။ တကယ်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က အစဉ်အလာကို ထောက်ချင့်ပြီး ရှင်လောင်းကို နတ်မပြတာကိုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ဆိုသင့်ပါသည်။ စာမတတ် ပေမတတ်၊ စာမဖတ် ပေမဖတ်ဘဲ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်ပြောနေခဲ့ကြတဲ့ သူတွေရဲ့စကားကို တဆင့်စကား တဆင့်မကမ်းကြဖို့ လိုပါသည်။ စာမတတ် ပေမတတ်၊ စာမဖတ် ပေမဖတ်တွေက ရှင်လောင်းကို နတ်ပြတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ပြောနေကြသော်လည်း စာတတ် ပေတတ်၊ စာဖတ် ပေဖတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေပညာရှင် ဓမ္မ)
(ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေးဘလော့ဂ်တွင်လည်း ဘာသာရေးပိုစ့်များ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည် )
နှင်ပေးဦးတော့ အပါယ်လမ်း ။
ဘဘဆရာကြီး အီကြာကွေးရဲ့ ပျော်မှာပေါ့ ........ သူတို့ ပျော်မှာပေါ့
မိုးတွင်းကာလ ဖြစ်လင့်ကစား ဟိုနား ဒီနား ပြောက်တိ ပြောက်ကျား ပူးနောင်ချပ်ခြိမ်း နောင်ချပ်ခြိမ်း ဆိုင်းသံဖြင့် နတ်က နေသည်ကို မြင်ရသည်။ မိုးတွေက တအုံးအုံးရွာ၊ ဆိုင်းက တငြိမ့်ငြိမ့်တီး၊ နတ်က မနားတမ်းက၊ ကြည့်တဲ့လူတွေက မိုးစိုခံ ၊ မိုးပက်ခံပြီး ထီးဆောင်းကြည့်၊ အလုပ်ကြီး အကိုင်းကြီးတွေဆိုတာ သူတို့မှ အစစ်။ “နတ်ကရာ ကြည့်မော့”ဟု ရှေးလူကြီးများ ဆိုရိုးစကားရှိသည်။ ဘာမဟုတ် ညာမဟုတ် နတ်ဝင်သည်တွေ မူးရူး ခုန်ပေါက် ကနေသည်ကို အလုပ်ပျက်ခံ၊ အချိန်ကုန်ခံ၍ သွားကြည့်သူက ရှိသေးသည်။
“နတ်ရူးဘုံမြှောက်” ဟုလည်း စကားရှိပြန်သည်။ ၃၇-မင်း နတ်များမှာ ဘာဘုံမှ မရှိ။ ဘုံမပြောနှင့် လေးတိုင်စင်တောင် မရှိ။ သူတို့ကို ကိုးကွယ်သူတွေက ဆောက်ပေးမှ စင်နှင့်နေရသည်။ နတ်ရူးဘုံမြှောက် စကားထက် “နတ်ရူးဗုံမြှောက်” စကားကို ဂုရုကွေး ပိုသဘောကျသည်။ ပူးနောင်ချပ်ငြိမ်း နောင်ချပ်ခြိမ်းဟု ဆိုင်းသမားက ဗုံနှင့်မြှောက်ပေးလိုက်လျှင် နတ်ဝင်သည်က အရူးပမာ ခုန်ပေါက်မြောက်ကြွကာ ကွေးနေအောင် ကသည် မဟုတ်ပါလော။ ဒါကို ခေါင်းဖြူစွယ်ကျိုးတွေက လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးကာ (ကျွန်တော်မျိုးမ အမိုက်အမဲလေးတွေကို ခွင့်လွှတ်ပါ) တဲ့ ။ အမိုက်အမဲလေးတွေ မဟုတ်။ အမိုက်အမဲကြီးတွေ ဖြစ်သည်။ သူတို့ အရွယ်မှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာမြတ်သုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမည်။ ဘာမဟုတ်သည့် နတ်တွေကို သွားကိုးကွယ်နေခြင်းမှာ မိုက်မဲခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို အမိုက်အမဲကြီးများကား ငယ်ရွယ်စဉ်က စ၍ ယခုအရွယ်အထိ အစဉ်တစိုက် ရူးလာသော နတ်ရူးများသာ ဖြစ်ပေသည်။
အိမ်ပေါက်ဝတွင် ရပ်ပြီး ခုနှစ်မောင်းတင်၍ ဟစ်လိုက်သော ဂုရုကွေး၏အသံကြောင့် တစ်အိမ်လုံး ယောက်ယက်ခတ်သွားသည်။ အတန်ကြာမှ (ရှိပါတယ်၊ ကျွန်တော်မျိုးမ တုတ်စာ ရှိပါတယ်) ညှောင်နာနာ ဖြေသံနှင့်အတူ အိမ်တံခါးပွင့်လာသည်။ တံခါးဝတွင် ယောက်ျားစစ်စစ်ဧကန်ဖြစ်ပါလျက် အားနွဲ့သည့် မိန်းမသားလို ကနွဲ့ကလျ ရပ်နေသော ကနားစီး ဥက္ကလာ တုတ်စာ။
“ဟောတော့၊ ဒုက္ခပဲ။ အကုသိုလ်တော့ အပြားလိုက် ကပ်ပါပြီ။ ဂျာနယ်ထဲက ရေးလိုက်တာနဲ့တင် ကျွန်တော်မျိုးမတို့ ကြောက်ပြီးသားပါ။ ခုလို အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လာတယ်ဆိုတော့..........”
ဂုရုကွေးကို မြင်လိုက်သည်နှင့် အခြောက်တုတ်စာ ပျာနေအောင် ကြောက်သွားသည်။ ပက်ပင်းသား မိထားပြီ ဆိုတော့ ထွက်ပြေး၍လည်း မရတော့ ။
“အကုသိုလ် အပြားလိုက် ကပ်တာတွေ၊ အလုံးလိုက် ဆောင့်တာတွေ၊ အတောင့်လိုက် ၀င်တာတွေ ဒါတွေထား။ အိမ်အထိ လိုက်လာတာက နင့်ကို ဗျူးစရာရှိလို့ လိုက်လာတာ။ သစ်သားကို ပန်းပုထု ၊ ဆေးခြယ်ပြီး နင်တို့ လုပ်စားနေတဲ့ အရုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးစရာတွေ ရှိတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ......မေးပါ....မေးပါ ”
“နင်တို့ရဲ့ အရုပ်တွေက မျက်လုံးပြူးပြူးတို့၊ ပါးစပ်ပြဲပြဲတို့၊ သွားခေါခေါတို့ ဒါမျိုးတွေချည်းပဲ။ ဓါးထမ်းတာတို့၊ ကျားဘေးက ရပ်နေတာတို့ ၊ ခေါင်းမှာ ချိုနှစ်ချောင်း ပေါက်နေတာတို့ ဒါတွေလဲ ပါသေးတယ်။ ဒါက နတ်ယုံသူတွေ၊ အသိဥာဏ် အဆင့်နိမ့်တဲ့သူတွေကို ချောက်ထားတာ မဟုတ်လား”
“ဂုရုကြီးကလဲ ၊ ဒီလို ပြူးချောက်၊ ဖြဲချောက်ထားမှ သူများတို့ အလုပ်ဖြစ်တာ၊ သူတို့ကြောက်ပြီး ကနားကြီး ပေးရမယ်၊ မပေးရင် ဘာဖြစ်မယ်၊ ညာဖြစ်မယ် ၊ ဘာညာကွိကွ၊ ကနားခွင်ရိုက်လိုက်တော့.....ဟော.... သူများတို့လဲ ဖွတ်ကလိ ဒင်္ဂါးတွေ အထပ်လိုက်ရတယ်။ သူများတို့နဲ့ ပူးတွဲလုပ်စားနေတဲ့ နတ်ဆိုင်းသမားတွေလဲ စို့စို့ပို့ပို့ ရတယ်”
“နင်တို့ အရုပ်တွေရဲ့ မျက်ခွက်ကို မိုးဒီတို့၊ မော့စ်တို့၊ အရိုင်းတို့၊ ကုသိုလ်တို့လို စပ်ဖြဲဖြဲရုပ်တွေ ထုကြည့်စမ်း၊ ဘာဖြစ်မလဲ”
“နတ်ယုံတဲ့သူတွေ ဘယ်ကြောက်တော့မလဲ၊ ရယ်ကုန်ကြမှပေါ့။ တမင် မကြောက်ကြောက်အောင် ချောက်ထားတာပါလို့ ဆိုနေမှ..... ဟင့် ...သူများပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့ အတွင်းရေးတွေ ပေါ်ကုန်တော့မယ်”
“အေး........ ငါကလည်း မပေါ်ပေါ်အောင် ဗျုးမှာပဲ။ ကနားတွေမှာ နဖူးသည်း ပိတ်စကို ဘာကြောင့် အနီရောင် သုံးသလဲ။ နတ်ဝင်တာလဲမဟုတ်။ အင်ပြီးလိမ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ဓါတ်လိုက်ခံရသလို တုန်တုန် တုန်တုန်လှုပ်တဲ့ အခါ နင်တို့ခေါင်းမှာ ဘာလို့ ပ၀ါနီတွေ ပတ်ထားတာလဲ။ နင်တို့ ရင်ဘတ်မှာ ဘာကြောင့် ပ၀ါနီတွေ စည်းထားတာလဲ”
“ဂုရုကြီးကလဲ... အနီရောင်က အပူရောင်လေ။ လူကြောက်အောင် တမင်အနီရောင်ကို သုံးတာ”
“ကနားနဖူးစည်းကို အအေးရောင်ဖြစ်တဲ့ အစိမ်းနု၊ အပြာနုလေးတွေ သုံးမယ်၊ ခေါင်းစည်းပ၀ါ၊ ရင်စည်းပ၀ါတွေကို အရောင်နုနု၊ အရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတွေ သုံးမယ်ဆိုရင်.....”
“နတ်တွေဟာ ကြောက်စရာ အကောင်းဘဲ ဖက်နမ်းချင်စရာ ကောင်သွားမှပေါ့လို့ ”
“ငါငယ်ငယ်က ဓနုဖြူမှာ နေကတည်းက ယိမ်းက ဖူးတယ်။ အရပ်ပြဇာတ်တွေ ကတယ်။ ရွှေမန်းသဘင်မှာ ရှေ့ပိုင်းပြဇာတ် ဒါရိုက်တာ လုပ်ဖူးတယ်။ ဇာတ်အကြောင်း၊ ဆိုင်းအကြောင်း အထိုက်အလျောက် တီးမိ ခေါက်မိတယ်။ ဇာတ်ဆိုင်း၊ ဗလာဆိုင်း၊ နတ်ဆိုင်း ဆိုင်းသုံးမျိုးမှာ နတ်ဆိုင်းက ပတ်မများကို ထုရတယ်။ စည်ကို များများခေါက်ရတယ်။ ဒါဟာ နတ်ကနေတဲ့ နင်တို့ကို မမြောက်မြောက်အောင် လုပ်ပေးတာပဲ။ ဆိုင်းနဲ့ ပံ့ပိုးပေးရတာပဲ။ နတ်ရူဗုံကပ် ရှေးစကားအတိုင်း နင်တို့ ကလို့ရအောင် ဗုံနဲ့ မြှောက်ပေးတာပဲ”
“မှန်ပါတယ် ဂုရုကြီး။ ကနားပွဲမှာ ဘင်ဂျိုတွေ၊ မယ်ဒလင်တွေ၊ စန္ဒရားတွေ၊ တယောတွေ၊ ခြောက်လုံးပတ်တွေနဲ့ သီချင်းကြီး တူရိယာအဖွဲ့လို လုပ်လို့ မရဘူး။ စည်တိုနှစ်လုံး၊ သုံးလုံးထားပြီး တမင် မဆူဆူအောင်၊ နားမငြီးငြီးအောင် ၊ အရပ်အခေါ် (ဆူတီး)ပေါ့။ နားနားတီးပေးရတယ်။ နာနာခေါက်ပေးရတယ်။ နတ်ဆိုင်း အဆိုတော်ကလဲ အသံကုန် အသံပြဲနဲ့ နာနာဆိုပေးရတယ်။ ဆိုင်းသမားတွေကလဲ ဟေးလားဝါးလားနဲ့ နနာအော်ပေးရတယ် ။ သူများတို့တစ်တွေ နာနာအော်လေး ကနားရှင် နာနာအထိနာလေ၊ ဖွတ်ကလိ ဒင်္ဂါးတွေ သိန်းချီနာပြီ မဟုတ်လား”
“ဆိုင်းသမားနဲ့ နင်တို့ပင်းပြီး ကနားရှင်ကို မြှောက်လုံးကလေးတွေ၊ ပင့်လုံးကလေးတွေ လုပ်တာ ငါသိထားတယ်။ လေ့လာထားတယ်။ ဥပမာ - ဒကာဆိတ်က ကနားပေးတယ် ဆိုပါတော့။ နင်တို့ ဘာဆိုသလဲ (နေ့ရော ညရော အရောင်မမှိန် တကာဆိတ်တို့ အိမ်)၊ ငါပျော့ ပေးတယ်ဆိုလဲ (နေ့ရော ညရော အရောင် မမှိန် ဟာကြူလီ ငပျော့တို့အိမ်) ၊ ဒါပဲ မဟုတ်လား။ ကနားရှင် နာမည်သာပြောင်းသွားတယ်။ မြှောက်လုံး ပင့်လုံးကတော့ ဒါပဲ ”
“ဂုရုကြီးက အကုန်သိနေတော့ သူများတို့ ရှေ့ရေး ရင်လေးစရာပဲ”
“ဘာမှ ရင်လေးမနေနဲ့။ နတ်ကတော် အတွင်းရေးဆိုပြီး နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး လျှောက်ရေးဖို့ အချက်အလက်တွေ စုထားပြီးပြီ။ အလျဉ်းသင့်တဲ့အခါ ဂျာနယ် တစ်စောင်စောင်ကနေ ငါဖွင့်ချမယ်။ နင်တို့ အရုပ်တွေမှာ ဘာတန်ဖိုးရှိလဲ”
“သူများတို့ ဒါတွေနဲ့ လုပ်စားနေတာပဲ၊ သူများတို့ အသိဆုံး၊ ဘာတန်ဖိုးမှ မရှိဘူး”
“နတ်ယုံတဲ့သူတွေ၊ အသိဥာဏ် နိမ့်ပါးတဲ့ သူတွေကို အရုပ်နဲ့ချောက်၊ အရောင်နဲ့ချောက်၊ အတီးနဲ့ ချောက်ပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ နင်တို့တစ်တွေ အရုပ်ကို ကြောက်သလား၊ ငါ့ကလောင်ကို ကြောက်သလား”
လင်းဦး( စိတ်ပညာ )
သို့တွေ့ဆုံစဉ် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် အယူအမြင် စင်ကြယ်ရေး၊ ကိုးကွယ်မှု စင်ကြယ် သန့်ရှင်းရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာတော်၏ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ရပ်တည်ဖြေဆိုချက်များအား ကျွန်တော်မေးမြန်း ကြားနာခဲ့ရသည်များကို ပြန်လည် ဓမ္မဒါန ပြုလိုက်ပါသည်။
၁၈၈၅ခုနှစ်တွင် သီဟိုဠ်(သီရိလင်္ကာ)နိုင်ငံအစိုးရက ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ဗုဒ္ဓနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်၍ အခမ်းအနား ကျင်းပရန် စီစဉ်ကြသည်။ ဤတွင် ဗုဒ္ဓနေ့အခမ်းအနား၌ လွှင့်ထူမည့် ဗုဒ္ဓအထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်ခတ် သာသနာ့အလံတော် လိုအပ်နေပေသည်။ ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဗိုလ်မှူးကြီးအိုလကော့က ဖြည့်ဆည်း ပေးလိုက်သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး အိုလကော့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာ့အလံတော်အဖြစ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ ထူးခြားသော ရောင်ခြည်တော်(၆)သွယ်ကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထိုအကြံပြုချက်ကို အကြောင်းပြု၍ ၁၈၈၅ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံးကျင်းပသည့် သီဟိုဠ် (သီရိလင်္ကာ)နိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနားတွင် စတင်အသုံးပြု လွှင့်ထူပူဇော်ခဲ့ပေသည်။ ၁၉၅၀ပြည့်နှစ်တွင် ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ညီလာခံမှ အညီအညွတ် သဘောတူဆုံးဖြတ်၍ ရောင်ခြည်တော်(၆)သွယ်ဖြင့် စီစဉ်ထားသည့် ဗုဒ္ဓသာသနာ့ အလံတော်ကို ကမ္ဘာ့အ၀န်း၌ ဦးထိပ်တင်လွှင့်ထင်ပူဇော်ခဲ့ကြပေသည်။
တန်ခိုးပြခြင်းသည် အဓိက မဟုတ်ပါ
အမှန်မှာ “စကား”ဆိုသည့်အတိုင်း စ,ကားလာကာ တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ နည်းနည်းမှ အများကြီး ကားထွက်သွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပုဂံခေတ်ကစကောချပ်လေလွင့်ပါသဖြင့် “စကောချပ်ကြီး ပါပြီ” ဆိုသည်ကို “စကောတပ်ကြီးချီလာပြီ”မျိုး ဖြစ်သည်က များပါသည်။ စေတီတော်များ၌ တန်းခိုး ပြခြင်းက နည်းပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် မန္တလေး နေပြည်တော်ကြီး စတင်တည်ထောင်တော်မူသည့် မင်းတုန်းမင်းကြီး လက်ထက်က မဟာမြတ်မုနိဘုရား ရောင်ခြည်တော်လွှတ်သည်ဟု ပြောကြပြီး ပျံ့နှံ့သွားကာ ဟိုကလာ၊သည်ကလာနှင့်ဘုရားကို ဖူးမြော်ကြည်ညိုလိုခြင်းထက် အထူးအဆန်းကို ကြည့်လိုသူတွေက များနေကြလေသည်။
အရှင်မြတ်က “မင်းကြီး ရဟန္တာတစ်ပါးပါးကလည်းကောင်း၊ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များကသော် လည်းကောင်း၊ သဒ္ဓါထက်သန်သည့် သီလရှင် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း အဓိဌာန်ပြုလျှင် ဘုရားရှင်တို့၏ စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာပြသည်”ဟု ဖြေတော်မူ၏။
အရှင်မြတ်က“ရဟန္တာတစ်ပါးပါးသည် လူနတ်တို့ကို အစဉ်သနားတော်မူသဖြင့် ရပ်တည်တော်မူလျက် “ဤမည်သော တန်ခိုးပြာဋိဟာသည် ဤစေတီ၌ပြစေသတည်း”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုလျှင်ဖြစ်စေ၊ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့က လူအများကို အစဉ်သနားသဖြင့် “စေတီ၌ ဤတန်ခိုးပြာဋိဟာဖြင့် သူတော်ကောင်းတရားတည်းဟူသော သာသနာတော်သည် အမြဲချီးမြှောက်အပ်သည် ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူအများကြည်ညိုသဒ္ဒါကြီးမား ကုသိုလ်တရား၊ တိုးပွားလိမ့်မည်”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုသော (အမျိုးကောင်းသား၊ အမျိုးကောင်းသမီး) ပညာရှိသည် ပန်းနံ့သာ၊ အ၀တ်ပုဆိုးစသော လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို တင်မြှောက်၍ “ဤစေတီမှ တန်ခိုးပြာဋိဟာ ပြပါစေသတည်း”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုလျှင်ဖြစ်စေ ဘုရားရှင်တို့၏ စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာပြသည်။ ထိုသို့ အဓိဋ္ဌာန် မပြုလျှင် တန်ခိုးမပြပါ။ ထို့ပြင် ရဟန္တာတို့၏ စေတီ၌လည်း တန်ခိုးပြခြင်းမရှိပါ” ဟု ဖြေတော်မူ ပါသည်။
မိလိန္ဒပဥှာအတိုင်း ရဟန္တာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ နတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားရှင်၏ စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြခဲ့သော် ထိုစေတီတော်သို့သွား၍ တန်ခိုးကြီးသောဘုရား၊ ရောင်ခြည်တော် လွှတ်သောဘုရားဟု မိမိ၏ကြီးပွားရေး၊ ရာထူးတက်ရေး၊ ကျော်စောထင်ရှားရေး စသည်ကို ရည်မှန်းပြီး ရှိခိုးဖူးမြော်ခြင်း၊ လှူဒါန်း ပူဇော်ခြင်း “တစ်ဘ၀”ကောင်းစားရေးအတွက်မျှလောက် ဆိုလျှင် အကျိုးမများလှပေ။ အကြောင်းမှာ မိမိ ကိုယ်ကျိုး မျှော်ကိုးလုပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤအတိုင်း မှန်မမှန် လေ့လာကြည့်ပါ။ အချို့သူများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် မည်သည့်ဘုရားက တန်ခိုးကြီး သည်၊ မည်သည့်ဘုရားက ရောင်ခြည်တော်လွှတ်သည်၊ မည်သည့်ဘုရားက ဆုတောင်းပြည့်သည်၊ မည်သည့် ဘုရားသွားဖူးလျှင် မည်သည့်အလိုဆန္ဒ ပြည့်ဝသည် စသဖြင့် ယုံကြည်မှုများနေကြသည် မဟုတ်ပါလား။ ယုံကြည်သည့်အတိုင်းလည်း သွားရောက်ဖူးမြော် လှူဒါန်းနေကြသည်။ဘုရားရှင်၏ရုပ်ပုံတော်ထက် ဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြုရမည်ကို မေ့လျော့ နေကြသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် များစွာသော ရဟန်းသံဃာနှင့်အတူ ကောဋ္ဋိရွာဆီသို့ ကြွရောက်တော် မူပြီးလျင် ထိုရွာ၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့ကို မိန့်တော်မူ၏
ရဟန်းတို့ အရိယသစ္စာလေးပါးတို့ကို လျော်ကန်စွာ မသိခြင်းကြောင့်၊ ထိုးထွင်း၍ မသိခြင်းကြောင့်၊ ငါသည် လည်းကောင်း၊ သင်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ရှည်လျားလှစွာသော ဤ(သံသရာ) ကာလပတ် လုံး ပြေးသွားခဲ့ရလှလေပြီ၊ ကျင်လည်ခဲ့ရလှလေပြီ။
အဘယ်လေးပါးတို့ကို(မသိခြင်းကြောင့်)နည်းဟူမူ-ရဟန်းတို့ ဆင်းရဲအမှန်(ဒုက္ခအရိယသစ္စာ)၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန် (သမုဒယအရိယသစ္စာ)၊ ဆင်းရချုပ်ရာအမှန် (နိရောဓအရိယသစ္စာ)၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းလမ်းစဉ်အမှန် (မဂ္ဂအရိယသစ္စာ) ဖြစ်သည်။
ရဟန်းတို့ (ငါသည်) ထို အရိယ သစ္စာလေးပါးကို လျော်ကန်စွာ သိပြီ၊ ထိုးထွင်း၍ သိပြီ၊ ဘဝ၌ တပ်မက်ခြင်း( ဘဝတဏှာ) ကို အကြွင်းမဲ့ဖြတ်ပြီးပြီ၊ ဘဝသစ်သို့ ဆွဲဆောင်တတ်သော ကြိုးနှင့်တူစွာ ဘဝတဏှာသည် ကုန်လေပြီ၊ ယခုအခါ တစ်ဖန် ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ပြီ ဟု မိန့်တော်မူ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် အပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော စကားကို မိန့်တော်မူပြီးလျင် ဤသို့ဆိုလတ္တံ့သော စကားကိုလည်း မိန့်တော်မူပြန်၏-
"အရိယသစ္စာလေးပါးတို့ကို ဟုတ်မှန်သောအတိုင်း မသိခြင်းကြောင့် ထိုထို ဘဝတို့၌ ရှည်လျားလှစွာသော(သံသရာ) ကာလပတ်လုံး ကျင်လည်ခဲ့ရလေပြီ၊ ထိုအရိယသစ္စာတို့ကို (ငါသည်) သိမြင်ပေပြီ၊ ဘဝသစ်ကိုဆွဲဆောင်တတ်သော ကြိုးနှင့်တူစွာ ဘဝတဏှာကို ကောင်းစွာနုတ်ပယ်ပြီး ပေပြီ၊ ဆင်းရဲ၏ အမြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ဖြတ်ပြီးပေပြီ၊ ယခုအခါ တစ်ဖန်ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်း မရှိတော့ပြီ" ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
*** မြတ်စွာဘုရားသည် သစ္စာလေးပါးတရားကို အလေးအနက်ထားတော်မူရခြင်း အကြောင်းရင်းကို စာဖတ်သူများ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည် ။ မြတ်စွာဘုရား၏ အလေး အနက်ထားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့မှ လေးစားစွာဖြင့် နာကြားကျင့်ကြံရမည် မဟုတ်ပါလား….
မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုကောဋ္ဋိရွာ၌ နေတော်မူစဉ်လည်း ရဟန်းတို့အား ဤသို့သော တရားစကားကိုသာလျင် အကြိမ်များစွာ ဟောတော်မူ၏ -
"ဤကား သီလတည်း၊ ဤကား သမာဓိတည်း၊ ဤကားပညာတည်း။
• သီလ၌တည်၍ ဖြစ်စေအပ်သော သမာဓိသည် များသောအကျိုးအာနိသင်ရှိ၏။
• သမာဓိ၌တည်၍ ဖြစ်စေအပ်သော ပညာသည် များသောအကျိုးအာနိသင်ရှိ၏။
• ပညာ၌တည်၍ ဖြစ်စေအပ်သော စိတ်သည် ကာမသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ ဒိဋ္ဌာသဝ၊ အဝိဇ္ဇာသဝ ဟူသော အာသဝေါတို့မှ ကောင်းစွာသာလျင် လွတ်မြောက်၏" ဟု(ဟောတော်မူ၏)။
(၁၈) ဒေသစာရီကြွချီတော်မူလျှင် ခြေရာမတင်သည့်အပြင် မြေအညီအညွတ်ဖြစ်ရခြင်း။
Today, there have been2visitors (4 hits) on this page!	မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်များ ပြန့်ပွားရေးအတွက် အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို ကူးယူနိုင်ကြပါသည်